Qalabaynta Shaabadaynta Birta
Samaynta aaladda iyo shaambadaynta alaabada
Waxaan nahay shirkad sameysa qalab iyo shaabad lagu shaabadeeyo. Shirkaddu waxay u qaybsan tahay lix waaxood oo waaweyn: qaabeynta, farsamaynta, isku imaatinka, shaabadaynta, iyo hubinta tayada. Laga soo bilaabo isgaarsiinta macaamiisha ee ku saabsan amarka mashruuca ilaa wareejinta qalabka, xiriir kasta oo ka mid ah shixnadaha alaabada ayaa si dhow isugu xiran ....Akhri wax dheeraad ah »
Waxaan diyaarinaa oo u rarnaa qalabka dayactirka qalabka ay sameysay MAGNA. Waxaan tijaabinay meesha uu ku yaal dalool kasta oo ka mid ah qeybta shaqada.Akhri wax dheeraad ah »
Waqtiga dhejinta: Jul-01-2021
Dhoofinta Mexico Qalabka sheyga ee qalabkani waa aluminium leh dhumucdiisuna tahay 1.0mm. Qaabka wax soo saarku waa mid adag, shuruudaha dulqaadkuna way ka sii badan yihiin. Sababtoo ah daloolka weyn ee ku yaal bartamaha badeecada, ballaca isku xirka qeybta hore ee dhammaadka sheyga waa cidhiidhi, alaabtii ayaa dib loo bilaabay ...Akhri wax dheeraad ah »
Qalabka gawaarida bareega
Waxaan u sameynay aalado fara badan oo gawaarida lagu gooyo Jarmalka, Mexico iyo Spain. Waxaan ku soo koobnay khibrad farsamo badan oo ku saabsan qalabka wax lagu duubo iyo qaab dhismeedka qalabka iyo dib u habeynta qalabkan wax soo saarka. Laga soo bilaabo shaybaarka ugu horreeya, waqtigu waa 12 toddobaad. Waxaa lagu soo koobay 8-10 toddobaad hadda, iyo ...Akhri wax dheeraad ah »
Automobile qalab joogto ah
Waa markii ugu horreysay ee qalab loo sameeyo macmiil Jarmal ah, macmiilkuna waa aqoonsaday. Macaamilku wuxuu ku qanacsan yahay tayadeena iyo wada shaqeynta kooxeed. Waxaan isticmaalnay 2 toddobaad si aan u qaabeyno caaryada, 3 usbuuc si aan u shaqeyno, 4 si aan isugu soo uruurinno una xallino, iyo 1 toddobaad aan u dhammaystirno. Waad ku mahadsantahay kalsoonidaada ...Akhri wax dheeraad ah »
Gawaarida gawaarida joogtada ah, Qeyb ka mid ah qalabka GESTAMP ayaa loo dhoofiyey Spain, dhumucda walxaha waxay ahayd 3.0mm, maaddadu waxay ahayd JSH599R Qalabku wuxuu sameeyay 16 saldhig, cabirka qalabka wuxuu ahaa 3350mm * 750mm, culeyska feerka wuxuu ahaa 1000T, miisaanka caaryadu wuxuu ahaa 4.3T. Qalabka maanta ugu horeeya iskuday, kormeerka cabirka 8 ...Akhri wax dheeraad ah »
Alaabada daboolka gaariga
Tani waa badeecad qalab joogto ah u leh daboolka dambe ee gawaarida. Macaamiisha sheygan waxay u baahan tahay in bayonet-ka wareegga gudaha uu yahay cajalad dhalaalaysa oo leh hal dhumuc go'an oo dhererkeedu yahay 14.8mm. Waxaan ku leenahay burrs, qallooca iyo jeexjeexyada bayonetka wareega gudaha inta lagu gudajiray tijaabadii ugu horeysay ee caaryada. Ka dib deynta ...Akhri wax dheeraad ah »
Baadhitaanka gacanta fudud
Waqtiga dhejinta: Jun-02-2021
Waxaan u sameynaa baaritaanka xogta iftiinka buluuga ah sameynta, qaabeynta, iyo qeybaha mindi-ku-xiran, waxaanan macaamiisha siinaa warbixinno kormeer 3D ah. Tayada iyo saxsanaanta qalabka si weyn ayaa loo hagaajiyay.Akhri wax dheeraad ah »
Waxyaalaha birta aan lahayn
AT = 8.0 wax bir birta ah oo loo dhoofiyo Mareykanka, feerna lagu garaacayo 5.3mm gudaha, macaamilka codsi suunka dhalaalaya, waxaan isticmaalnay 16mm dhexroor T feer, 5.3mm dherer dherer 7.5mm ah si loo daboolo baahiyaha macaamiisha, hada 50,000 bil kasta Cadadku waxay ku jiraan wax soo saarka macaamiisha . Waxaan sameynay ...Akhri wax dheeraad ah »
T = 0.9 alaabada aluminium. Macaamiilku wuxuu codsaday xargaha dhexe. Xadhiggu wuxuu ahaa mid aan degganayn markii ugu horreysay ee aan tijaabinno qalabka. Habka loogu daro waxyaabo ballaaran si loo gaaro qanacsanaanta macaamilka ayaa la gaarey. Hadda qalabku wuxuu bilaabay inuu tijaabiyo oo tijaabiyo ...Akhri wax dheeraad ah »
Alaabooyinka carrabka qufulka
wuxuu xiraa alaabada carrabka ee loo soo diray Mareykanka waxay si isdaba joog ah u soo saareen 300,000 oo gogo 'oo macaamiisha ah, wasakhda iyo wax soo saarka hadda waxaa loo geeyaa macaamiisha wax soo saar. Waxaan ku qaadanay 5 usbuuc sameynta aaladda, 2 toddobaad usbuucyada, iyo 1 usbuuc wax soo saar ...Akhri wax dheeraad ah »
alaabada gacanta lagu qaato shandadaha iyo alaabada qalabka guryaha
Kani waa qalabka wax lagu duubo ee loogu talagalay alaabada alaabta lagu qaato iyo qalabka guryaha. Wax soo saarka ayaa lagu duraa Mareykanka. Intii lagu guda jiray wax soo saarka caaryada, waxaan ku dabaqnay bareegooyinka TICN daahan si aan u sameysano qaybo iyo feedho si kor loogu qaado iska caabinta dharka inta lagu jiro wax soo saarka. Komishanka ...Akhri wax dheeraad ah »
Hongye Sayniska iyo Teknolojiyada Beerta, No. 359, Wadada Waxbarashada, Dalingshan Town, Dongguan City, Gobolka Guangdong
Waxaan nahay shirkad sameysa qalab iyo shaabad lagu shaabadeeyo. Shirkaddu waxay u qaybsan tahay lix waaxood oo waaweyn: qaabeynta, farsamaynta, isku imaatinka, shaabadaynta, iyo hubinta tayada. Laga soo bilaabo isgaarsiinta macaamiisha amarka p ...